आज पनि पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो सुनको मूल्य! हेर्नुहोस् कति पुग्यो |
August 4, 2021 August 4, 2021 adminLeaveaComment on आज पनि पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो सुनको मूल्य! हेर्नुहोस् कति पुग्यो
काठमाडौं । बुधबार सुनको मुल्यमा गिरावट आएको छ भने चाँदीको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ३ सयले घटेर प्रतितोला ९२ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार छापावाला सुन तोलाको ९२ हजार ३ सयमा नै कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रहेको छ । त्यसैगरी चाँदीको मूल्य भने आज तोलामा १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १२८५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि:उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि नवप्रर्वतन प्रस्ताव आह्वान (Start–up Ideas Call) कार्यक्रम सुरु भएको छ। सरकार, वित्तीय संस्था र नीति क्षेत्र बीच त्रिपक्षीय सहमति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा नवप्रवद्र्धन प्रस्ताव आह्वान (Startup Idea Call) कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। काठमाडौंमा बुधवार आयोजित समुद्घाटन सत्रमा वेबसाइट र भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समुद्घाटन गरेका हुन्।